Namni siyaasaa Inijinar Yiliqaal Geetinnet maaliif dhaaba siyaasaa heddu hundeessu? - BBC News Afaan Oromoo
Namni siyaasaa Inijinar Yiliqaal Geetinnet maaliif dhaaba siyaasaa heddu hundeessu?
Image copyright Yilikal Getnet
Daddabarsi paartii injiinerichaa waggaa 10 caalaa jira. Paartii duraan qaban lama irraa ka'uun paartii biraa lama hundeessan.
Paartii 'Tokkuummaan bilisummaafi dimokiraasiif' jedhamu keessaa qajeelfamni haa kabajamu jechuun yommuu bahan, adda duree turan. Achii bahuunis dhaaba siyaasaa Samayawii paartii hundeessuun dura taa'aa turan. Booda booda paartii samayawiin ala paartiin biraas akka hundaa'u yaadamaa ture.
Paartiin Samaayaawwii yeroo gabaabduu keessatti akka fudhatama argatu kan taasise hoggansa inni kennaa turedha jedhama akkasuma yeroo diigamus harkisaanii keessa jira jedhama.
Tibbanas paartii haaraa qabatanii yommuu achii as bahan namoota hedduu ajaa'ibsiiseera.
Warraaqsa biyyaalesaa Itoophiyaa paartii jedhamu hundeessuunsaanii torbe darbe ifa tahee ture.
BBC'n maaliif paartii haaraa hundeessuun barbachise? jedhee gaaffii dhiyeessefii ture.
Isaanis yeroo ammaa kana fedhii uummatni jijjiiramaaf qabu akka malee dabaluusaatiin, paartiin qabsoo fi hoggansa kana waliin deemsisuu danda'u hundaa'uu akka qabu dirqama tahuusaa hubachuun hundeessine jedhan.
Itti dabaluunis sirnichi paartiilee mormitootaa akka diinaatti ilaalaa waan tureef paartii cimaan dorgomuu danda'u akka hin jiraanne taasisaa tureera. Amma paartiin keenya haaraan qaawwaa kana ni guuta jennee abdanna jechuun Injiiner Yiliqaal ibsu.
Paartiileen humna xixiqaa qabanii fi lakkofsaan 150 tahan biyya keessa osoo jiranii paartii haaraa hundeessuun keessan maal bu'aa buusa gaaffi jedhu ceepha'uun yommuu deebisan,gaaffiin keessan paartiin keessan maal hojjecheta?qophii akkamii qabdu?humni keessanoo ?maalis milkeessituu kan jedhu tahuu qaba malee biyya kana keessatti paartii haaraa maaliif hundeessitan jedhamee hin gaafatamu jechuun gaaffidhaan deebisan.
Jaalala taayitaa qabduu?
Injiiner Yiliqaal paartii Andinet ykn Tokkummaa Birtukaan miidhaksaa hundeesite kessatis tahe kannen biro keessa akka hoggansaattis tahe miseensaatti yeroo dheeraa hin turre.Waggaa tokkoo fi walakkaa duras paartii samaayawii waliin walitti bu'insa keessa galuun araarsuufillee rakkisaa tahee ture.
Namni ana beeku aangoo jaalata naan jedhee hin beeku tarii nama nah in beekne tahuu mala garuu rakkinni ani dhiisee bahe maalii kan jedhutu murteessa.Haa tahu malee naannoo paartii kana faayidaa maaliitu jira? Jedhu. Yeroo ammaa kana ogumaadhaan hojjette faayidaa guddaa kan itti argattu hojii baayeetu jira.Yoo faayidaa dhuunfaaf tahe paartii mormituu hundeessitee achi keessa hojjeta jedhee hin yaadu jedhan.
Inumaayyuu Itoophiyaa keessaa yeroo gabaabaaf hoggansa siyaasaa irra kan ture eenyu jettee osoo gaafatte yiliqaalidha jedhu.mee fakkenyaaf Biraanuu Naggaa yoo fudhatte ihaappaa irraa jalqabee qastedaammanaa,qinijjit,har'ammoo ginbot 7 irra waggaa meeqa ture? Dr Caannee paartii ideeppaa irraa yeroo hoggansaa lama ture jedhan.kansaanii garuu waggaa sadii qofa turuu himuun kanaaf ani nama aangoo jaalatu miti jechuun ibsan.
Mallattoo ykn loogoo kaartaa eeritiriyaa hamate
Karaa miidiyaa hawwaasaa akka malee kan ceepha'amee ture mallattoo ykn loogoo paartiisaanii kaartaa biyya Eeritiriyaa qabate ilaalchisee gam tokkoon ariitiidhaan kan hojjjetame gama biraan ammoo tokkumaa uummata biyyota lamaanii guddisnee mul'isuuf kan itti fayyadaman tahuu fi biyyota lamaanis adda baasuuf sararri taa'e sirriitti waan hin jirref itti fayyadamnera kun ni ceephaasiseera jechuun yaadasaanii kennan.
Waa'ee muummicha ministeeraa haaraa
Ministirichi waltajii hunda iratti abdii kennan hundaa akka hordofan himanii garuu adda godhee waanan ittiin isa ilaalu gara biraan hin jiru jedhan.
Paartisaaniitu isaan muude.Kun ammo miira uummmtaa nuuf tasgabbessuu danda'a jedhanii waan amananiif paartiinsaanii Arfan walitti dhufanii muudan.kun ammoo akka rakkinni biyyittii walirra tuulamu taasisa malee furmaata biraa fida jedhee hin yaadu jedhan.Kunis uummata callisiisuuf kan itti fayyadaman natti fakkata jedhan.Nama siyaasaa wanan taheef tarkaanfii xixiqqaa sirrefamaa fudhataniiti osoo hin taane jijjirama caasaa guutuutiinidha kana madaalu jedhan
Maqaa kabajaa injiiner jedhamuun maaliif wamamu?
Biyya Qanyaazmaach,Giraazmach,Baraanbaraas jedhamee waamama ture keessatti maqaa Kanaan waamamuun koo nama hin ajaa'ibsiisu, garuu aniyyuu maqicha hin jaalladhu jedhan.Tahus Yuunivarsiitii kibbaa irraa misooma bishaanii [water tecnoligy] dhaan digirii jalqabaa qabu.Isaanis Yiliqaal jedhamuun waamamuu akka barbaadan himaniiru.